Any Antananarivo no mifanaraka fa aty Ambohimasina dia samy mandeha samy mitady ny IRD sy Freedom ary MMM amin’ny fifidianana ho mpanolontsain’ny tanàna hatao amin’ny 27 novambra 2019.
Kaominina ambanivohitra ao amin’ny Distrika Arivonimamo i Ambohimasina. Enina ny lisitra mpanolontsaina mifaninana eto Ambohimasina. Samy nandrotsaka lisitra ny IRD (Isika rehetra miaraka @ Andry Rajoelina) sy Freedom ary MMM (Malagasy Miara Miainga) miampy ny an’ny Tiako i Madagasikara sy lisitra tsy miankina roa.
Voalaza fa tsy nifanaraka ny IRD sy Freedom ka mifaninana ao amin'io Kaominina io.
mardi, 24 septembre 2019 12:46
Misokatra ofisialy anio 24 septambra any New York, hitohy rahampitso ny Fivoriambe faha-74 ny Firenena Mikambana. Ilay teratany nizeriana Tijjani Muhammad-Bande, no filoha mitarika ity fivoriambe faha- 74 ity.
Ntsay Christian, praiminisitra lehiben’ny governemanta, sady minisitry ny raharaham-bahiny, no mitarika ny delegasiona malagasy miatrika ny fivoriambe any an-toerana. Ny alahady 22 septambra teo izy no niala teto an-toerana.
mardi, 24 septembre 2019 10:33
Tetikasa « TANAMASOANDRO »: Tanimbary 100ha no hototofana
Raha ny fanazavan-dRanarivelo Fanomezantsoa Lucien, Minisitry ny Fambolena, ny Fiompiana sy ny Jono, dia honerana vola na soloina ny tanin’ireo tantsaha voakasiky ny tetikasa fanorenana tanàna vaovao eny Ambohitrimanjaka, Distrika Ambohidratrimo.
Tanimbary manana velarana 100ha no hototofana hanatanterahana io tetikasa « TANAMASOANDRO », vinan’ny filoha Andry Rajoelina io.
mardi, 24 septembre 2019 10:12
Morondava: « Foara Renala » andiany faha-5
Hotanterahina eto an-drenivohitry ny faritra Menabe ny 26-27-28-29 septambra izao ny « Foara Renala ». Andiany faha-5 ny amin’ity taona ity, izay mampivoitra ny otrikarena sy ny kolontsaina mampiavaka ny faritra Menabe, ary natao indrindra ihany koa hisarihana mpamatsy vola hanao tantsoroka ny fampandrosoana ny faritra.
Manasa ny mpanao gazety ny kandida ben'ny tanànan'Antananarivo Alban RAKOTOARISOA, fantatra amin'ny anarana artista hoe Gangstabab, fa hivoaka ny alarobia 25 septambra 2019 amin'ny 2 ora tolakandro ny "album" fahatelo: ALBUM FANGADY an'i "Gangstabab".
Eo amin'ny fokontany Antsahalovana Antohomadinika Mivondrona no ho avoaka izy io, ary omena maimaimpoana ireo sahirana.
Alban RAKOTOARISOA moa dia mitondra ny laharana faha 3 amin'ny bileta tokana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra, izay atao ny 27 novambra ho avy izao. Ny antoko APM no nandrotsaka azy.